Concord flyght समस्या
मर्ज गरियो Concord flyght समस्या
1 वर्ष 10 महिना पहिले #713 by कैसीबड
के कोलेन्डर उडान गर्ने कुनै समस्या छ? यो मैले देखेको छु मैले मलाई मार्न खोज्दैछु .... (बोनस र हिलाउन र फ्लाइटको दौडान साइड स्लिप्स)
1 वर्ष 10 महिना पहिले #714 by Dariussssss
यहाँ धेरै विमानहरू भाडा छन् ... नयाँ कुरा। Concorde ठीक हुन सक्छ, तर यो धेरै ज्ञान चाहिन्छ। तपाईंले ईन्टरनेट सबै समय हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यो स्थिर उडान गर्न एकमात्र तरिका हो।
1 वर्ष 10 महिना पहिले #716 by Gh0stRider203
हावा तिनीहरू बिस्तारै छन् कि तिनीहरू एयरबस हुन्! LOL मैले कसम खाएको छु मैले Boeing भन्दा भन्दा एयरबस विमानसँग समस्याहरूको बारेमा थप पोष्टहरू देखेको छु
1 वर्ष 10 महिना पहिले #720 by कैसीबड
साथी!!!! तपाईंलाई थाहा छ कि ईन्धन ट्राफिक प्रणाली कसरी काम गर्दछ? म यसका साथ मजाक गर्ने प्रयास गरिरहेको छु र फिल्ड ह्वाइट हेर्न को लागी धेरै छ ... त्यहाँ कुनै पढ्ने सामाग्री छ?
1 वर्ष4महिना पहिले #947 by DRCW
कन्सर्ट एक साथ एक अलग जनावर हो, बस सुपर सोनिक उडान को कुनै चित्र को रूप मा। गुरुत्वाकर्षण केन्द्रको गणना गर्नु पर्छ। अक्षांश पनि विचार गरिनै पर्छ, जस्तै उच्च गति संग विमान को छाला। यात्री र सामान गणना गर्नुहोस् तपाईंको गुरुत्वाकर्षण केन्द्र। लाइनमा प्रक्रिया पढ्नुहोस्। विमानको बारेमा जान्नुहोस्। त्यहाँ विमानमा एक ध्वनि काटने त्रुटि छ विकृत भएको रूपको कानमा कडा कठिन छ। सिर्जनाकर्ताले यो फाईल विमानमा ध्वनि फोल्डरमा गल्ती गरेर राख्दछ। यसबाट छुटकारा पाउन, ध्वनि फोल्डर खोल्नुहोस् र ध्वनि नमूनेहरूमा जानुहोस् जबसम्म तपाईले खराब संगीत ट्रयाक फेला पार्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि ठीक क्लिक गर्नुहोस् र मेटाउनुहोस्, सबै राम्रो छ।
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.518 सेकेन्ड